Indlela i-Federal Elections isebenza ngayo eKhanada
Ingqwalasela yokuVota kunye noRhulumente
I-Canada yintando yesininzi yentlangano yentlangano kumgaqo-siseko womgaqo-siseko. Ngoxa i-monarch (intloko yelizwe) inqunywe yi-heredity, amaKhanani akhetha amalungu epalamente, kwaye inkokheli yeqela elifumana izihlalo ezininzi ePhalamende liba ngumbongameli. Inkulumbuso isebenza njengentloko yegunya elilawulayo, ngoko ke, intloko ka rhu lumente. Bonke abantu abadala baseCanada banelungelo lokuvota kodwa kufuneka babonise ukuchonga okulungileyo kwindawo yabo yokuvota.
Ukhetho lwaseCanada lilungu elingekho lombutho elijongene nokuziphatha kokhetho lonyulo, ukhetho lonyulo kunye nama-referendum. Ukhetho lwaseCanada luhamba ligosa elikhethiweyo leCanada, otyunjelwe yisigqibo seNdlu yeeNgingqi.
Xa Ukhetho lweSithili lugcinwe eCanada?
Unyulo lwamazwe aseKhanada luhlala luqhutywa rhoqo kwiminyaka emine. Kukho umgaqo-suku othe ngqo kwiincwadi ezibeka "umhla ochanekileyo" wokhetho lonyulo oluya kubanjwa minyaka yonke emine ngoLwesine wokuqala we-Oktobha. Ngaphandle koko, ingakumbi xa urhulumente elahlekelwa yithemba leNdlu yeeNqununu.
Abemi baneendlela eziliqela zokuvota. Ezi ziquka:
Ukuvota kwiipota ngexesha lokhetho
Vote kwi-poll yangaphambili
Vote kwiofisi ye-Elections Canada
Ukukhwela kunye namaLungu ePalamente
Ubalo lubonisa izithili zikaKhanada okanye izithintelo. Kukhetho luka-2015 lwaseKhanada lonyulwa, inani leenqununu liye landa ukusuka ku-308 ukuya ku-338.
Abavoti kwiinqwelo ezikhethiweyo ngalinye ilungu lepalamente (MP) ukuthumela kwiNdlu yeeNgingqi. I- Senate eCanada ayiyilungu elikhethiweyo.
I-Canada igcina irejistra yamaqela ezopolitiko. Nangona amaqela angama-24 afunyanwa ngabaviwa kunye namavoti atyunjwe ukhetho lwango-2015, i-website yezokhetho zaseKhanada ibhalwe ngamaqela angama-16 abhalisiweyo ngo-2017
Iqela ngalinye linokukhetha umviwa omnye kwiinqwelo zokuhamba. Ngokuqhelekileyo, abameli beqela elithile lamaqela ezopolitiko aphezu kweeNdlu zeeNdlu. Ngokomzekelo, okhethweni luka-2015, kuphela iQumrhu le-Conservative, i-New Democratic Party, i-Liberal Party, i-Bloc Québécois, kunye ne-Green Party yabona abaviwa abakhethwe kwiNdlu yeeNgingqi.
Iqela eliphumelele ukugqithisa kakhulu kwi-electoral federal election libuzwa likarhulumente jikelele ukuba lenze urhulumente. Inkokheli yelo qela iba yinkulumbuso waseKhanada . Ukuba iqela liphumelela ngaphezu kwesigamu se-ridings-yizona zihlalo ezili-170 kunyaka-2015-ngoko kuya kuba noorhulumente abaninzi, okwenza kube lula ukufumana imithetho epapashwa kwiNdlu yeeNdlu. Ukuba iqela eliphumeleleyo lizuza izihlalo ezili-169 okanye limbalwa, liza kubumba urhulumente omncinci. Ukuze ufumane imithetho ngeNdlu, urhulumente obancinci ngokuqhelekileyo kufuneka ahlaziye imigaqo-nkqubo ukuze afumane amavoti aneleyo avela kumaPhalamende amanye amaqela. Urhulumente omncinci kufuneka asebenze rhoqo ukugcina intembelo yeNdlu yeeNgingqi ukuze ahlale emandleni.
Iqela lezopolitiko elinayo inani lezona zibini ezona ziphezulu kwiNdlu yeeNgqungquthela ziyaba yi-Opposition Official.
Ngubani uDkt Roberta Bondar?
Imvelaphi yaseBritish Columbia eCanada
Ukuzisa ugwayi eCanada - Abahlali baseCanada ababuya
I-Ottawa, iSeko-dolophu saseCanada
Yellowknife, iNkulu-mali yeeNdawo eziMntla-ntshona
I-US Presidents 'Quotes About Canada
Intlawulo yeNtloko yaseTshayina kunye noMthetho wokuKhutshwa kweTshayina eCanada
Ukufunda malunga neC # kubaQala
I-Dodge Ram i-Running Hotter kune-Normal
Yinqobe Inhliziyo Yomntu We-Sagittarius
Kutheni Ukuba Ngumntu Ophelela Ngomntu Ophelelekileyo Ungabangela Ukuba Kubi
Izifundo eziPhakamileyo zeSikolo eziPhezulu zokuFunda iChemistry kwiKholeji
Ngaba Ndifanele Ndiphule iWindows Window ukuze Ndisindise Inja kwiMoto Engumlilo?
Iziqulatho ezingabonakaliyo zesiLwimi zesiJamani
Ngaba Unyaka Omtsha unguNgcwele woMthwalo?
Ungaphila Kangakanani ixesha ngaphandle kokutya, Amanzi, Ukulala, okanye uMoya?
Izindlela zokuPhakamisa amahlathi
Iintlobo zeeNxweme zoLwandle (i-Marine Algae)
AmaBuddha amakhulu: Igalari yezithombe
I-Admissions yaseYunivesithi yaseGreat View
I-Wisa Waiver Countries Ikwahlulelana Iinkcukacha Zoburror, GAO Ithola
Yintoni iCawa yePesbyterian kwi-Homosexuality?
Isingeniso kuma-Medium acry for Painting
Iingxelo eziphezulu zePhrojani ye-Genealogy Research